भ्रम र यथार्थ : फास्टिङले झन् मोटो बनाउँछ - Naya Patrika
भ्रम र यथार्थ : फास्टिङले झन् मोटो बनाउँछ
धेरै युवा स्लिम बन्ने वा शरीरको मोटोपन घटाउने दौडमा छन् अचेल । आफ्नो शरीर घटाउन वा सन्तुलित राख्नका लागि डाइटिङ वा फास्टिङ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । के यो सही हो त ? यसको भ्रम र यथार्थबारे विश्वास खड्काथोकीले तयार पारेको सामग्री :
पछिल्लो समय युवापुस्तामा डाइटिङ गर्ने प्रचलन ह्वात्तै बढेको छ । मोटो शरीरलाई घटाउन भन्दै भोकै बस्ने युवतीहरूको संख्या निकै ठूलो छ । कतिपय बेलुकी खाना नखाई सुत्नेसमेत गर्छन् भने कति कम खाने गर्दछन् । डाइटिङ र फास्टिङ गर्दा मोटोपन घट्ने र स्लिम बन्ने धेरैमा भ्रम छ । तर, विभिन्न रिसर्चले भने यसरी डाइटिङ बस्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक नभएको बताउँछ । यसरी डाइटिङ वा फास्टिङ बस्नु वैज्ञानिक दृष्टिकोणले मानिसका लागि हानिकारक भएको बताउँछिन्, पोषणविद् उमा कोइराला ।
उमा कोइराला, पोषणविद्
डाइटिङ कसरी गर्ने भन्ने टेक्निकल विषय हो । कतिपयले मोटोपन घटाउने भन्दै चिल्लो, बोसो, आलुजस्ता खाद्यान्न नखाने गर्दछन् । तर, यो विषय प्राक्टिकल्ली पनि सही छैन ।
शरीरलाई २४ घन्टासम्म काम गर्नका लागि ब्यालेन्स डाइटको अवश्यकता पर्दछ । केही मात्रामा चिल्लो, बोसो, गेडागुडी, फलफूल, भात, आलु सबैको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले भोकभोकै डाइटिङ गर्दा शरीरमा हानि पु¥याउँछ ।
– हामी शरीर घटाउने वा स्लिम बन्ने नाममा भोकै बस्छौँ भने अर्कातिर एकदमै धेरै खाइदिन्छौँ । फास्टिङ गरेको अर्को दिन निकै भोक लागेको हुन्छ र उसले अत्यधिक खाना खाइदिन्छ । यसरी खाना खाँदा जति भए पनि नपुगेजस्तो अनुभव हुन्छ । यसले शरीर घट्नुभन्दा पनि
मोटाउन पुग्छ ।
– यसरी भोकभोकै डाइटिङ वा फास्टिङ गर्दा मानिसमा ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन्छ । र, बिस्तारै अपच हुने समस्या देखा पर्न थाल्छ । कतिपय आफ्नो शरीर घटाउने नाममा आलु र भातलाई छुँदैनछोएको बताउँछन् । यसो गर्दा शरीरमा पौष्टिक आहारको कमी हुन जान्छ । भातबाट भन्दा आलुबाट पौष्टिक तŒव पाइन्छ । यसलाई बहिष्कार गर्नुभन्दा पनि कम गर्नचाहिँ सकिन्छ ।
– यसरी भोकभोकै बस्दा पेटमा ग्यास भरिने, घाउ हुने मात्र नभएर सुकेनास हुने समस्या पनि देखिन्छ । मान्छे बढी पातलो भएमा वा लामो समय भोकै बस्ने बानीले पानी खाँदा पनि बमिट गर्ने समस्या देखा पर्न सक्छ ।
– भोकभोकै बस्ने बानीले रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न थाल्छ । र, मानिस थप कमजोर बन्दै जान्छ । किड्नी र लिभरले समेत राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन ।
कसरी गर्ने फास्टिङ ?
– यदि डाइटिङ नै गर्नु छ भने पनि पौष्टिक पदार्थ मिलाएर खानुपर्छ । धेरै भात, दाल, तरकारी र मासु खाने बानी छ भने त्यसलाई नियमित तर घटाएर खान सकिन्छ । मानिसको शरीरलाई नियमित काम गर्नका लागि सबै प्रकारका पौष्टिक तत्वको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले सबै चिज मिलाएर तर कम लिन सकिन्छ । अझ राम्रो त के भने डाइटिङ वा फास्टिङका पनि आफ्नै नियम हुन्छ । त्यसैले विज्ञ वा चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर मात्र यस्तो काम गर्नुपर्दछ ।
मधुमेहका रोगीले यस्तो खाना खाने
मोटरसाइकल/कारको माइलेज बढाउने तरिका
शिशु जन्मनासाथ यसरी ख्याल गरौं
गाडी चलाउँदा चालकलाई जुत्ता अनिवार्य